LHRH-A3 maka Ọgwụ Fish were - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A3 maka Ọgwụ 【Name of Veterinary Drug】 【Common aha】: Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A3 maka Ọgwụ 【English Name】: Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A3 maka Ọgwụ 【Major mgwa】: Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A3 【Description】 : ngwaahịa a bụ ọcha ifriizi-Fikiere ngọngọ ekara umi ma ọ bụ ntụ ntụ 【pharmacological mmetụta】: Ókè mmiri ọgwụ ọgwụ. Ngwaahịa a nwere ike kwalite azụ hypophysis nyak GTH; welie nwanyi azụ '...
Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A 3 maka Ọgwụ
【Common aha】: Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A 3 maka Ọgwụ
【English Name】: Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A 3 maka Ọgwụ
【Major mgwa】: Luteinizing Ókè mmiri ọgwụ insulin Ókè mmiri ọgwụ A 3
【Pharmacological mmetụta】: Ókè mmiri ọgwụ ọgwụ. Ngwaahịa a nwere ike kwalite azụ hypophysis nyak GTH; welie nwanyi azu follicle na secrete estrogen nke ga-enyere mee ngwangwa follicle okè, ovulation na mmepụta nke corpus luteum; akpali spam mmepụta na okè maka nwoke azụ. Ọ bụ a elu-oru oma azụ odinagogue, huu mma nrụpụta karịsịa maka ugwu ugwu ebe na nnukwu diurnal okpomọkụ ọdịiche na ogbenye gonad okè nke nne na nna azụ.
Akpata itinye n'ọkwa:
Ezie azu kaapu: otu ogwu ogbugba, 1.5-3.0mcg / n'arọ. Ike abuo na onunu ogwu maka nwoke azụ.
Chub, bighead: abụọ injections. Total onunu ogwu bụ 2-3mcg / n'arọ. The mbụ ọgwụ kwesịrị 0.3-0.6mcg / n'arọ. Ma ihe ndị ọzọ ga-agbara 10-12 awa ka e mesịrị. Ike abuo na onunu ogwu maka nwoke azụ.
Black azu kaapu: abụọ injections; mbụ ọgwụ: 0.7-1.0 mcg / n'arọ; nke abụọ ọgwụ mgbe 12-14 awa: 1.5-3.3 mcg / n'arọ + azụ hypophysis: 1-3mcg / n'arọ; maka ndị na-ogbenye gonad okè, ọgwụ ike ga-eji 10-20 ụbọchị tupu.
Okè osooso: igbari ngwaahịa a na nkịtị saline na wee jiri nwayọ atasị ngwakọta n'ime a ngwa agha nwere oleum morrhuae ma ọ bụ tii mmanụ ugboro ise nke ego karịa ngwakọta. Mike ya mgbe dripping-eme ka ọ emulsify. Tupu 10-25 ụbọchị nke na-akpata itinye n'ọkwa, igba dị ka kwa 0.2-0.5mcg / n'arọ. Ọ dịghị ọgwụ ma ọ bụ ike abuo na onunu ogwu maka nwoke azụ.
【Nkọwapụta】: (1) 25μg; (2) 50μg; (3) 100μg
【Ngwugwu】: 10pcs kwa ngwugwu
【Nchekwa】: echekwara site na ìhè, akara tightly, ma na-na jụụ, ebe ndị gbara ọchịchịrị
【Oge nke Ndaba】: afọ atọ
Previous: LHRH-A2 maka Ọgwụ Fish ojiji
Animal homonụ Ọgwụ N'ihi Dogs
Animals Ókè mmiri ọgwụ Estradiol Benzoate
Factory Manufacturer Ókè mmiri ọgwụ
Fish Ókè mmiri ọgwụ N'ihi Live azụ okpo
Ókè mmiri ọgwụ Peptides Oxytocin
Lhrh-A2 N'ihi Ọgwụ Fish Iji
Lhrh-A3 N'ihi Ọgwụ Fish Iji